CoSchedule: Edhiyo uye Yemagariro Ekutsikisa Karenda yeWordPress | Martech Zone
CoSchedule: Edhiyo uye Yemagariro Ekutsikisa Karenda yeiyo WordPress
Mugovera, Kukadzi 15, 2014 Mugovera, Kukadzi 15, 2014 Douglas Karr
Wow… chete wow. Ndakanga ndamboverenga nezvazvo CoScedule mwedzi yakati wandei yapfuura uye pakupedzisira paine imwe nguva yekunyorera kutongwa uye nekuzvipa bvunzo drive. Chaizvoizvo inonakidza plugin ine akawanda akawanda masimba andaive ndafungidzira.
Iko kugona kwekutarisa yako WordPress blog ne yekunyora karenda yezvinyorwa yakanga yaitwa kare, kunyangwe nekukweva nekudonhedza kugona. CoSchedule inotora khalenda yekunyora kune imwe nhanho nyowani, zvakadaro. Panzvimbo pekugadzira iyo khalendara kungoita maonero, ivo vakanyatsogadzira iyo yakazara mushandisi interface mukugadzirwa kwemukati weblog rako pamwe nekugovana kwaro munharaunda.
Heano mamwe maficha andinonyatsoda:
Ramangwana Rekukurudzira Kwemagariro - kune akawanda emagariro kusimudzira plugins, kusanganisira kugona kwe Jetpack kushambadzira zvinyorwa munzira dzenzanga. CoSchedule inozvitora zvishoma zvishoma kunyange iine kugona kutsikisa kusimudzira kwenzvimbo mumazuva anotevera, vhiki kana mwedzi!
Dhizaini Pane - unogona kufunga kuti ini ndiri nzungu, asi ndine makumi matatu madhisheni mune yangu blog izvozvi. Hazvireve kuti ini ndakanganwa nezvavo, dzimwe nguva ndinobatana nekambani yandiri kunyorera kuti ndiwedzere ruzivo. Dzimwe nguva ndinokanganwa ndine akawanda madrafti… asi iyo CoSchedule Chalenda ine sidepane iyo inoonekwa nezvako zvese zvinyorwa kana iwe uchinge waikoshesa. Iwe unogona ipapo kudhonza uye kudonhedza iyo positi kune iyo khalendari kana iwe uchida kuiburitsa!
Basa Rechikwata - tanga posvo nyowani pakarenda uye iwe unogona kuigovera kune mumwe wevanyori vako, yakanaka nzira yekutonga timu yako uye uve nechokwadi chekuti uri kuwana zvakaringana kuendesa zvemaposi kubva kune wese munhu (kana musoro wenyaya kubva kune mumwe munhu chaiye) nekutarisira yezuva rekuburitsa!
Kubatanidzwa - Seamless Buffer kusangana pamwe neBitly yekupfupisa URL, Google Analytics yekutevera mushandirapamwe, Tsika Ongororo (kana iwe uchimhanyisa chimwe chinhu senge Webtrends kana Saiti Catalyst), uye kunyangwe Google Calendar kusangana kuti uone zvawatumira pakarenda yako wega!
Tags: bitlybuffermushandirapamwe wekuteverapurogiramugoogle kalendarigoogle mushandirapamwekutsikisa munharaundaWordpress kushambadzira munharaunda
Kushumira ndiko Kutengesa kutsva